Post byဘင်္ဂလော၊ အိန္ဒိယ on Friday, March 02,2018
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးဆုံး ဆန်တင်ပို့တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့ ဆန်ဈေးဟာ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ပြည်ပ၀ယ်လိုအား ကောင်းလွန်းတာရယ်၊ ဈေးကွက်ထဲ ဆန်သိပ်မ၀င်တာရယ်၊ ရူပီးဈေးမာလာတာရယ်ကြောင့်ခြောက်နှစ်ခွဲ အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် အမြင့်ဆုံးဈေးတက်ခဲ့ပါတယ်။
“အာရှနဲ့ အာဖရိကဆန်ဝယ်သူတွေဘက်ကနေ ကမ်းလှမ်းလာတာတွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဘက်မှာ ဆန်အ၀င်က မများဘူး။ ဒါ့အပြင် ရူပီးဈေးတက်နေတာကလည်း အခုလိုဈေးတက်အောင် တွန်းပေးသလို ဖြစ်နေ တယ်”လို့ ဒန်ဒါရာပရာဒက်ရှ် အခြေစိုက် ကုန်သည်တစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ လေးနှစ်ကြာပိတ်ပင်ထားတဲ့ ဆန်မွှေးမဟုတ်တဲ့ ဆန်တင်ပို့ခွင့်ကို ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီး တဲ့နောက်မှာ ငါးမှတ်ဆန်တစ်တန်ဟာ ၃ ဒေါ်လာ ဈေးတက်လာပါတယ်။ အခုအခါမှာ ငါးမှတ်ဆန်တစ်တန်ဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၄၇ ကနေ ၄၅၁ အထိရှိနေပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ရူပီးဈေးကလည်း ၂ လအတွင်း အမြင့်ဆုံးကို တက်သွားတဲ့အတွက် ကုန်သည်တွေရဲ့ အမြတ်အစွန်းကို ထိခိုက်စေပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ဆန်တင်ပို့မှုဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ၂၂ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့ပြီး တန်ချိန် ၁၂ ဒသမ၃ သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ရေကြီးလို့ သီးနှံတွေပျက်စီးပြီး ဆန်တွေအများအပြား တင်သွင်းနေရတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဟာ ဆန်တစ်တန်ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၆၅ ဒေါ်လာနဲ့ ဆန်တန်ချိန် တစ်သိန်းခွဲ ၀ယ်ယူဖို့ သဘောတူထားတာကို ဖျက်လိုက်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ငါးမှတ်ဆန်တစ်တန်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က တစ်တန်ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၄၀ ကနေ ၄၄၈ ဒေါ်လာရှိခဲ့ပြီး ယခုတစ်ပတ်မှာ တစ်တန်ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၄၃ မှ ၄၄၆ ဒေါ်လာ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ လေးနှစ်အတွင်း အမြင့်ဆုံးတက်နေတဲ့ ဘတ်ငွေဈေးကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ဆန်စပါးအသင်းက တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
ဘတ်ငွေဈေးတက်ပါက ဆန်ဈေးပါ လိုက်တက်ပြီး ဆန်တင်ပို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကမ္ဘာ့ဆန်ဈေးကွက်အတွင်း ထိုင်းဆန်တွေဟာ အခြားနိုင်ငံက ဆန်တွေနဲ့ ဈေးအရ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့မှာကို ထိုင်းကုန်သည် တွေက စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။
“အကုန်လုံးက ငွေလဲလှယ်နှုန်းအပေါ်မှာ မှီတည်နေတယ်။ ကျွန်တော့်လုပ်ငန်းဆိုရင် ငြိမ်နေတယ်။ ဖောက် သည်တွေက ပြောတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဆန်ဈေးတွေက ဈေးကြီးလွန်းတယ်တဲ့”လို့ ဘန်ကောက် အခြေစိုက် ကုန်သည်တစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။
ဗီယက်နမ်မှာတော ဆန်ဈေးက တက်ပြီး ငြိမ်နေပါတယ်။ ငါးမှတ်ဆန်တစ်တန်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၅၀ ရှိခဲ့ပြီး ဒီတစ်ပတ်မှာလည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၄၀ ကနေ ၄၅၀ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကုန်သည်တွေကတော့ အင်ဒိုနီးရှားကို တင်ပို့ဖို့အတွက် ဆန်လုံလုံလောက်လောက်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအပါအ၀င် နိုင်ငံပေါင်း လေးနိုင်ငံကနေ ဆန်တန်ချိန် ၃၄၆၀၀၀ တင်သွင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာ ဆန်ဈေးတွေ တက်နေတာဖြစ်ပါတယ။်
ဆောင်းစပါးတွေဝင်လာတော့မယ့် ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ဆိုရင်တော့ ဆန်ဈေးတွေ ငြိမ်သွားနိုင်တယ်လို့ ကုန်သည်တွေက ဆိုပါတယ်။
“ဆန်ဈေးတွေက ကျနိုင်ပါတယ်။ ဒါကလည်း အဲဒီအချိန်မှာ အ၀ယ်လိုက်မလိုက်အပေါ်မူတည်ပါတယ်” လို့ ဟိုချီမင်အခြေစိုက် ကုန်သည်တစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။
တခြားကုန်သည်တစ်ဦးကတော့ အခုအခါမှာ ဟက်တန်ပေါင်း တစ်သိန်းခွဲလောက်မှာ စပါးတွေကို ရိတ်သိမ်း ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာ တစ်နှစ်ကို စပါးစိုက်ဧရိယာဟာ ဟက်တာ ၁ ဒသမ ၆၅ သန်းရှိပါတယ်။
Thanksalot for giving everyone suchaspectacular possiblity to read from here. It really is so sweet and also packed with amusement for me personally and my office mates to search your web siteaminimum of3timesaweek to read the latest stuff you have. And indeed, I'm also actually fascinated considering the exceptional inspiring ideas you serve. Some3areas on this page are essentially the most effective I've had.
by http://www.nikebasketballshoes.us.com at May 19 2019
I actually wanted to typeaquick word in order to express gratitude to you for the stunning guidelines you are writing on this site. My time-consuming internet look up has now been honored with reliable facts to share with my good friends. I 'd declare that most of us readers are really endowed to exist inareally good website with so many lovely people with useful techniques. I feel really grateful to have seen your web site and look forward to many more fun minutes reading here. Thanksalot once more foralot of things.
by http://www.curry5shoes.net at May 14 2019
I would like to voice my gratitude for your generosity for people that really need assistance with this topic. Your very own dedication to getting the solution all around turned out to be definitely productive and has specifically enabled regular people much like me to attain their ambitions. This warm and helpful facts indicates much to me and substantially more to my mates. Regards; from everyone of us.
by http://www.nikefoamposite.us.com at May 10 2019
I together with my guys were found to be viewing the nice secrets from your web page while before long I gotahorrible suspicion I had not expressed respect to the site owner for those strategies. My young men came absolutely glad to see all of them and already have in reality been using them. Appreciate your actually being really accommodating and then for deciding on such amazing ideas most people are really eager to know about. My personal honest apologies for not expressing appreciation to you earlier.
by http://www.jordan-retro.us.com at May 06 2019